एसिया कपको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपालले खेल्न पाउने सम्भावना कति ? – Everest Dainik – News from Nepal
एसिया कपको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपालले खेल्न पाउने सम्भावना कति ?
काठमाडौँ, साउन ९ । आगामि भदौ ३० गते अर्थात सेप्टेम्बर १५ देखि संयुक्त अबर इमिरेट्स, युएईमा आउँदो सुरु हुने एसिया कप क्रिकेट २०१८ को खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । सेप्टेम्बर २८ सम्म हुने प्रतियोगितामा एसियाका टेष्ट मान्यता प्राप्त पाँच देश र छनौट भएर जाने एक गरी ६ देशले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । नेपाल, हङकङ, युएई, सिंगापुर, ओमान र मलेसियाबिच छनौट प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यो प्रतिस्पर्धाको विजेताले एसिया कपमा स्थान बनाउने छ ।
यसको विजेता टिमले एसियाका टेस्ट राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तानसँगै एसिया कप खेल्न पाउने छन् । भारत र पाकिस्तान समूह ए मा छन् । छनौट प्रतिस्पर्धाको विजेता पनि यहि समूहमा रहनेछ । यसको अर्थ नेपालले छनौट प्रतिस्पर्धा जितेमा भारत र पाकिस्तानसँगको समूहबाट खेल्नु पर्नेछ । यस्तै बंगलादेश, श्रीलंका र अफगानिस्तान समूह बी मा छन् । दुवै समूहको शीर्ष दुई टिम सुपर ४ मा प्रवेश गर्नेछन् ।
समूह चरणका खेल सेप्टेम्बर १५ देखि २० तथा सुपर ४ का खेलहरु सेप्टेम्बर २१ देखि २६ सम्म हुनेछ । फाइनल खेल सेप्टेम्बर २८ मा हुनेछ । सन् २०१६ मा ट्वेन्टी-ट्वेन्टी फर्म्याटमा भएको एसिया कप यसपटक एक दिवसीय फर्म्याटमा हुँदैछ । एसिया कपको साबिक विजेता भारत हो ।
पहिलो पटक एक दिवसीय मान्यता पाएको नेपालले एसिया कपका लागि ६ टिम सम्मिलित छनौट प्रतियोगिता खेल्दैछ । जसमा एक दिवसीय मान्यता प्राप्त देश युएईसँगै हङकङ, ओमान, सिंगापुर र मलेसिया रहेका छन् र नेपालले यिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । गएको मार्चमा जिम्बाबेमा भएको विश्वकप छनौटमा एसोसिएटतर्फ शीर्ष तीनमा अटाउन सफल हुँदै एक दिवसीय मान्यता पाएको नेपाल अहिले बेलायत र नेदरल्याण्ड्स भ्रमणमा छ । नेपालले जुलाई २९ मा लड्र्समा ट्राई सिरिज र अगष्ट पहिलो हप्ता नेदरल्याण्ड्ससँग उसैको मैदानमा एक दिवसीय शृङ्खला खेल्दैछ । यस्तो छ एसियाकपको खेल तालिका-
ट्याग्स: एसिया कप, खेल तालिका सार्वजनिक